အံအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များ - အွန်လိုင်းကာစီနိုအပိုဆုကုဒ်များ
(766 ပျမ်းမျှအားမဲ: 5.00 )5ထဲက
Loading ... အစောပိုင်း 1990s အတွက်လွတ်လပ်ရေး၏ကွှေးကျွောခွငျးပြီးနောက်, အံဂိမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်။ သို့သော် 1998 သည်အထိပြုလုပ်လုံးဝထိန်းအကွပ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒါဟာလောင်းကစားများနှင့်ထီကျော်ထိန်းချုပ်ရေးစစ်ဆေးရေးဖန်တီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ 2013 အသုံးပြုပုံပြီးသား 17 လိုင်စင်ထုတ်ပေးပြီ။ ထိုအ 2012 အသုံးပြုပုံတိုင်းပြည်အတွက်လောင်းကစားဝိုင်းကုမ္ပဏီတွေရဲ့လည်ပတ်ငွေကြေးကြောင့် slot ကစက်တွေဆောင်ခဲ့ပါပြီအရှိဆုံးအရာထက်ပို 180 ယူရိုသန်း, ပမာဏ။
အချိန်ကျော်, တိုင်းပြည်၏လောင်းကစားဝိုင်းဥပဒေများတဖြည်းဖြည်းလောင်းကစားဝိုင်းစက်မှုလုပ်ငန်း၏နယ်ပယ်ထိန်းချုပ်တင်းကျပ်ခဲ့သည်။ 2016 အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်အခွန်၏အရွယ်အစားကိုတိုးမြှင့်ဖို့လတ်ဗီးယားအတွက်ဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ လောင်းကစားများ၏နယ်ပယ်ကန့်သတ်ထားရန်ဤဆုံးဖြတ်ချက်နှင့်အခြားတင်းကြပ်အတိုင်းအတာတစ်ခုအရေအတွက်ကလောင်းကစားများ၏အရေအတွက်သည်တဖြည်းဖြည်းနိုင်ငံတွင်း၌လျှော့ချခဲ့သည်ဟူသောအချက်ကိုမှဦးဆောင်ခဲ့သည်။ ပစ္စုပ္ပန်မှာရှိ5ကာစီနိုလောင်းကစားရုံဖြစ်ကြပြီးရုံ 300 ဂိမ်းကစားခန်းမကျော် - ကထက်ဝက်နီးပါး 2007 နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါသည်။
ထိပ်တန်း 10 အံအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
တိုင်းပြည်တွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစားများ၏စျေးကွက် 2003 အတွက်တရားဝင်နှင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အံကစားသမားလောင်းကစားဝိုင်းရာပူဇော်သက္ကာကိုလတ်ဗီးယားအတွက်အားလုံးက်ဘ်ဆိုက်များအွန်လိုင်းလောင်းကစားမသင်မနေရလိုင်စင်ခံယူအပေါင်းတို့နှင့်ဝင်ငွေ 10% ၏အခွန်ပေးဆောင်ရမည်ဖြစ်သည်။ သို့သော် 2011 ကတည်းကဥရောပမှာအာရုံစိုက်မှုများ၏အရာဝတ္ထုဖြစ်လာခဲ့သည်ပေးသောလတ်ဗီးယားတွင်အွန်လိုင်းလောင်းကစား၏ဥပဒေများပြောင်းလဲပစ်ရန်အစီအစဉ်များရှိဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, သေးသောပွညျ့စုံခဲ့သေးပါဘူး။
2014 ၏တရားအရ, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းမှအကျော်ကြားဆုံးဖဲချပ်ဝေခန်းအပါအဝင်လတ်ဗီးယားအားလုံးကိုအွန်လိုင်းလောင်းကစားထူထောင်မှု, တရားဝင်လတ်ဗီးယား၏နိုင်ငံသားတွေကသူတို့ရဲ့န်ဆောင်မှုများကိုတိုင်းပြည်အတွင်းမှတ်ပုံတင်ရပါမည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, အဆက်မပြတ်ထက်ပိုနေတဲ့တထောင် domains များရှိပြီးဖြစ်သောယနေ့, အွန်လိုင်းလောင်းကစားလောင်းကစားပိတ်ဆို့က်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတိုးချဲ့။
လတ်ဗီးယားထံမှကစားသမားကိုလက်မခံကြောင်းအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းတစ်ခုကိုကြည့်ပါနှင့်မြင့်မားသောအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံဂိမ်းများကိုပူဇော်သက္ကာဘို့။ ဒီနေရာတွင် slot ကစက်တွေကနေဂိမ်းတွေ NetEnt, Merkur, IGT, Novoline, Microgaming, Betsoft, ပြိုင်ဘက်ဂိမ်း, နှင့်အခြားသောကဲ့သို့သောကျော်ကြား software ကိုရောင်းချသူထံမှအသက်ရှင်နေထိုင်လောင်းကစားရုံမှဖျော်ဖြေရေး၏ကျယ်ပြန့ရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျကိုလည်းအကောင်းဆုံးအွန်လိုင်းပရိုမိုးရှင်းများ, ဆုကြေးငွေများနှင့်လတ်ဗီးယားထံမှကစားသမားမှမရရှိနိုင်ပါငွေပေးချေမှုရွေးချယ်စရာသတိထားဖြစ်, အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံက်ဘ်ဆိုက်များကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းဖတ်နိုင်သည်။
လတ်ဗီးယား - တခေတ်မီကြော့ရှင်း၎င်း၏ပယင်းအဘို့အကျော်ကြား, ဆော်လမွန်ငါးနှင့်ဘောလ်တစ်ပင်လယ်၏ကြီးမြတ်အမြင်များနှင့်အတူတစ်တိုင်းပြည်။ ရီဂါ, Jurmala နှင့်မြောက်ပိုင်းထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းပေါ်ကျော်ကြားအပန်းဖြေစခန်း, ဒါပေမယ့်မနည်းလှပသောသဘာဝတရား၏ကျဉ်းမြောင်းသောလမ်းများ - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုဤတိုင်းပြည်၏အမာခံများဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအမှုအရာလတ်ဗီးယားအတွက်လောင်းကစားရုံစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ထိုအရပ်၌အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံ၌ဤတိုင်းပြည်တွင်ကစားရန်အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်ကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါးအတွက်ရှင်းလင်းဖို့ကြိုးစားပါလိမ့်မယ်ရှိမရှိဘယ်လောက်ပါပဲ။
ပစ္စုပ္ပန်နေ့ 1990 ထံမှလောင်းကစားများ၏သမိုင်း;
နိုင်ငံတကာအော်ပရေတာပိတ်ဆို့မထားလျှင်, ကခွင့်ပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါပေမယ့်မည်သည့်အချိန်တွင်တရားမဝင်၏စာရင်းအရမည်အကြောင်း,
ပြည်တွင်းအော်ပရေတာလိုင်စင်နှင့်အင်တာနက်အာကာသအတွင်း၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ကြသည်။ Optibet, အိုလံပစ်ကာစီနိုလတ်ဗီးယား, Joker, Ltd, viensviens.lv "DLV", "Alfor": ဤကဲ့သို့သောဆိုက်များအားဖြစ်ကြသည်။ အားလုံး6.lv ဒိုမိန်းများပေါ်တွင်ပါ၏
ရီဂါများတွင် 30 မြေယာ-based ကာစီနိုလောင်းကစားရုံ။ ဟိုတယ်တွင်တည်ရှိသည်။ 18 + နိုင်ငံကူးလက်မှတ်;
သမိုင်းနောက်ခံ - လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လတ်ဗီးယားဥပဒေများ
ဆိုဗီယက်ခေတ်တွင်လတ်ဗီးယားအပြည့်အဝဆိုဗီယက်၏ဥပဒေပြုလိုက်နာရန်နှင့်၎င်း၏ပိုင်နက်အပေါ်လောင်းကစားဝိုင်းကောက်ယူခဲ့သည်။ သင်တန်းအတွက်တစ်ခုတည်းသောပြည်နယ်ထီခဲ့ကြသည်။ သြဂုတ်လ 21, 1991 လတ်ဗီးယားသည်၎င်း၏လွတ်လပ်ရေးမိန့်တော်မူ၏, ဤတိုင်းပြည်တွင်ဤရက်စွဲကနေလောင်းကစားဝိုင်းကဏ္ဍ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏င်း၏လမ်းကြောင်းကစတင်ခဲ့သည်။ ဗိုလ်မှူးဖြစ်ရပ်များနှင့်ကျွန်တော်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုအတွက်စားပွဲပေါ်မှာ form မှာတင်ပြဥပဒေပြုဖြေရှင်းနည်းများ။
1990 အဆိုပါ eponymous ဟိုတယ်အတွင်းပထမဆုံးလောင်းကစားရုံ "ရီဂါ" ။ ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလိုင်စင်အောက်မှာလည်ပတ်, ဒါပေမဲ့သူတို့အနည်းငယ် gos ပေးပါ။ အာဏာပိုင်များ - ဒေသခံအာဏာပိုင်များ, ပြည်တွင်းရေးရာဝန်ကြီးဌာနနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန။ လက်တွေ့တွင်ဤအဘယ်သူအားမျှမလိုင်စင်နှင့်မည်သို့ကာစီနိုလောင်းကစားရုံလည်ပတ်ထုတ်ပေးသောတိုင်းပြည်အတိအကျမည်မျှသိတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုစေပါတယ်။
1994 အဆိုပါ "ထီနှင့်လောင်းကစားဝိုင်းတွင်" ပထမဥပဒေများကိုမွေးစားနှင့် "ထီနှင့်လောင်းကစားအပေါ်တာဝန်နှင့်အခွန်တှငျ။ " ဒီဥပဒေတွေလောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်အခွန်များ၏ငွေပေးချေမှုကိုထိန်းညှိအဖြစ်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့လိုင်စင်နှင့်ပါမစ်ထုတ်ပေးဘို့အခကြေးငွေ၏အရွယ်အစားကိုသတ်မှတ် လောင်းကစားဝိုင်းတွင်။
1995 နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီအော်ပရေတာရဲ့ရှယ်ယာမြို့တော်ပိုမ 49 ထက်% ရှိနိုင်ပါသည်။ ဂိမ်းစီးပွားရေး၏အံအသင်းအဖွဲ့။
2005 "လောင်းကစားများနှင့်ထီတွင်" ဒီဥပဒေသစ် - ထိုလောင်းကစားရုံ၏အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဧည့်သည်များမှတင်းကျပ်လိုအပ်ချက်များကို။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်လောင်းကစားစွဲအကြောင်းကိုအသိပေးတဲ့ဗွီဒီယိုစောင့်ကြည့်စနစ်, ပိုကောင်းလုံခြုံရေး, တံဆိပ်များ, ဖြစ်သင့်သည်။
2014 ဇွန်လ 1, လတ်ဗီးယားအတွက်လိုင်စင်မကနိုင်ငံတကာအွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံများနှင့်လောင်းကစားအော်ပရေတာများ၏ပိတ်ဆို့ခြင်း၏အစအဦးကတည်းက။ Lock ကိုအဆိုပါထီနှင့်လောင်းကစား (ထီနှင့်ကြီးကြပ် Inspection- IAUI လောင်းကစား) ၏စစ်ဆေးရေးကြီးကြပ်မှုထဲမှာပါဝင်နေသည်။ တရားဝင်လတ်ဗီးယား၌တည်ရှိ၏နှင့်ပညတ်တရား၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်မှန်မှန်အခွန်ပေးဆောင်လိုင်စင်ရရှိခဲ့ကြောင်းသူတို့သာအွန်လိုင်းအော်ပရေတာအလုပ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
လတ်ဗီးယားအတွက်တရားမဝင်ကာစီနိုလောင်းကစားရုံကိုအင်တာနက်အော်ပရေတာပိတ်ဆို့။ သငျသညျတခုအွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံမှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်, ဒါကြောင့်ကစားရနိုင်ပါ။
တစ်ဦးကအတိုချုပ်အကျဉ်းချုပ်။ သငျသညျကစားနိုင်ပါတယ် - access ကိုအွန်လိုင်းရှိပါသည်။ ဒါပေမယ့်တရားမဝင်က်ဘ်ဆိုက်များစာရင်းအဆက်မပြတ်သတိထားပါ, ကြီးထွားလာနေပါတယ်။ သင့်ရဲ့လောင်းကစားရုံအကောင့်ဖို့လက်လှမ်း၏ "အနက်ရောင်စာရင်း" ၌ဖြစ်လိမ့်မည်ဆိုပါကဖယ်ရှားပစ်ရန်သာအခြားတိုင်းပြည်ကနေသင်တို့ကိုအနိုင်ရနိုင်ပါတယ်ခက်ခဲပါလိမ့်မယ်။
အွန်လိုင်းလောင်းကစားရုံများတွင်တရားဝင်ဂိမ်းပါသလား enabled - လတ်ဗီးယားအတွက်လက်ရှိတွင်အခြေအနေကအဘယ်အရာကိုတားမြစ်ထားသောသည်မဟုတ်ခြင်းနှင့်ပိတ်ဆို့မဟုတ်ကြောင်းထိုကဲ့သို့သောဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျထို site မှဝင်ရောက်ခွင့်ရှိသည်ဆိုလျှင်, ထို့နောက်သင်ကစားနိုင်ပါတယ်။ သူတို့ကိုယ်သူတို့ IP address ကိုသဖြင့်အချို့သောနိုင်ငံများမှအသုံးပြုသူများကပိတ်ဆို့တခါတရံလောင်းကစားရုံဆိုဒ်များ။ အပြည့်အဝအချက်အလက်များကိုလောင်းကစားရုံ site ပေါ်တွင်တိုက်ရိုက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။
အွန်လိုင်းကာစီနိုလောင်းကစားရုံယုံကြည်စိတ်ချရသောရှိပါသလား ဒီအတှကျအသငျသညျယုံကြည်စိတ်ချကာစီနိုလောင်းကစားရုံကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းကိုသုံးပါနှင့်လတ်ဗီးယား၏ပိုင်နက်မှာသူတို့ရဲ့တရားဝင်မှုရှင်းလင်းခြင်း (ထိန်းညှိသည့်အချိန်တွင်မဆိုဆိုက် add နိုင်ပါတယ်, ဒါကြောင့်စာရင်းကိုအပေါ် 100% အာမခံချက်နိုငျသညျ, alas, အဘယ်သူမျှမမှပေးပါ။ ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ကိုကိုယ်မနိုင် ။ လက်ျာအွန်လိုင်းအော်ပရေတာအဓိကအာရုံစိုက်ဖို့လိုအပ်သင်တို့အပေါ်မှာတွေ့ပါ:
အနည်းဆုံး3နှစ်ပေါင်းမှာအတှေ့အကွုံအလုပ်မလုပ်;
Player ကိုဖွင့်မှတ်ချက်များ (positive နဲ့ negative);
တုံ့ပြန်ချက်၏ရှေ့မှောက်တွင် - chat, e-mail, အသေးစိတ်ဆက်သွယ်ပါ;
လိုင်စင်ဆော့ဖ်ဝဲကိုလူသိများ developer များ (စသည်တို့ကို Microgaming, NetEnt, Playtech,);
ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုစနစ် - SSL encryption, ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏စိစစ်အတည်ပြု။
အပိုဆုသည့်စနစ်ရှိပါသလား? အဘယ်အရာကိုအာမခံနှင့် "အထဲကသရုပ်ဆောင်" အခြေအနေများ? အဆိုပါ loyalty အစီအစဉ်တွေကဘာတွေလဲ
သင်ကြိုက်နှစ်သက်ကြောင်းမဆိုဂိမ်းရှိပါသလား ဒါဟာလောင်းကစားရုံဂိမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေအကြောင်းကိုအားလုံးရှင်းရှင်းလင်းလင်းသတင်းအချက်အလက်, site ကိုအညွှန်းသနည်း
သင်ကစားပွဲကိုစတင်နီးပါးအဆင်သင့်ပါပဲ - သင့်ကိုယ်သင်ဒီမေးခွန်းတွေကိုမမေးပြီးတာနဲ့။ ကျနော်တို့ (များသောအားဖြင့်အခမဲ့ဂိမ်းရှိပါတယ်) သင်သိုက်မရှိဘဲလောင်းကစားရုံရဲ့အစမှာစမ်းသပ်ကြောင်းအကြံပြုအဖြစ်ဂိမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေနဲ့ bankroll စီမံခန့်ခွဲမှုအပေါ်အကြံဉာဏ်ကိုလိုအပ်ခဲ့လျှင်ဖတ်ပါ။ ဒါကြောင့်သင်ကအများဆုံးပျော်မွေ့ရနှင့်၎င်းတို့၏ရန်ပုံငွေ၏ဆုံးရှုံးမှုကို minimize နိုင်ပါတယ်။
အမျိုးမျိုးသောအရွယ်အစား၏ 30 လောင်းကစားဝိုင်းထူထောင်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးလတ်ဗီးယား၏မြို့တော်ဖြစ်သည်။ ကျွန်တော်တို့ကိုနှစ်ခုအကြီးဆုံးနှင့်အများဆုံးဇိမ်ခံထည့်သွင်းစဉ်းစားကြစို့ - အိုလံပစ်အတွက် Voodoo ကာစီနို၏ နှင့် တော်ဝင်ကာစီနို .
သူတို့ကို၏ပထမဦးဆုံးကုမ္ပဏီပိုင်ဆိုင် အိုလံပစ် Entertainment ရဲ့ Group ၏ဖြစ်ပါသည် , ထိုဘောလ်တစ်ဒေသတလျှောက်လုံးအဖြစ်ပိုလန်, လိုဗက်ကီးယား, ဘီလာရုစ်နှင့်အီတလီမှာရှိတဲ့လောင်းကစားဝိုင်းအိမ်၏ကွန်ယက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့။
မစိုးရိမ်ပါနဲ့, အလောင်းကစားရုံအနက်ရောင်မှော်နဲ့ဘာမှရှိပါတယ်။ ဟိုတယ်တည်ရှိသောဤပထမလူတန်းစားစားသောက်ဆိုင်, ရှိတဲ့ Radisson Blu ဟောငျးမြို့အနီး။ slot နှစ်ခု, ကစားတဲ့, Blackjack နှင့်ဖဲချပ်များအတွက်စားပွဲတွေအများကြီးရှိပါတယ်။
တိုင်းသောကြာနေ့နှင့်စနေနေ့ဘားအတွက်အိုလံပစ် Voodoo ကာစီနိုတိုက်ရိုက်ဂီတမှာဒီရက်ကထိုင်ဖို့ပျော်မွေ့သည်။
အနည်းငယ်ထပ်မံဗဟိုကနေ - တော်ဝင်ကာစီနို Spa ဟိုတယ် & Resort ကိုဖြစ်ပါတယ် ။ ဟောငျးအလွန်လှပသောအလွန်ကြီးမားဖျော်ဖြေရေးတစ်နိုက်ကလပ်နှင့်အတူရှုပ်ထွေး, ဘား, စားသောက်ဆိုင်နှင့်သင်တန်း၏, တစ်ဦးလောင်းကစားရုံ။
ရှုပ်ထွေး၏လောင်းကစားဝိုင်းတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအလွန်စျေးကြီးကြည့် - တော်ဝင်အခန်းများပုံနဲ့ဆင်တူရွှေ, တောက်ပနေ, စပျစ်သီးသောအရာတို့ကို။ တော်ဝင်ကာစီနိုတည်ခင်းဧည် Poker ကမ္ဘာ့ချန်ပီယံရှစ် , လည်းပဲ အဆိုပါ Unibet အဆိုပါဖွင့်ပါ .
ရိုးရာကစားနည်းများ - slot ကစက်တွေ, ကစားတဲ့, Blackjack, etc ..
အလွန် "အပျော့" ရှိလျှင်နှစ်ဦးစလုံးအဖွဲ့အစည်းများအတွက်စားဆင်ယင် code ကို။ ကိုယ့်တယ်လျောက်ပတ်စွာဝတ်ဆင်ရနှင့်မျှမပြဿနာတွေ input ကိုဖြစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
ရီဂါ, လတ်ဗီးယား: "မြောက်ကိုရီးယား၏ပဲရစ်"
ရာစုနှစ်ရက်မှာမြောက်ဘက်-အရှေ့ပိုင်းဥရောပအတွက်အရေးအပါဆုံးနှင့်အကြီးဆုံးမြို့တော်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အခုတော့အံမြို့တော်အတွက်အနည်းငယ်လျော့နည်းတထောင် 700 ထက်လူတွေကိုမူလနေရာဖြစ်သည်။
ရီဂါကိုသူအကြိမ်ကြိမ်ပဲရစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ထားပြီးဖြစ်သောများအတွက် Daugava မြစ်၏ဘဏ်များအပေါ်တည်ရှိပါတယ်။ တဲလင်းမြို့မှာရှိတဲ့လိုပဲရီဂါတစ်ခုအံ့သြဖွယ်ရှိပါတယ် မြို့ဟောင်း , ထိုအကြိမ် loop တစ်ခုအဖြစ်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များအတွက်အဆောက်အဦးများတဲ့အရေအတွက်ဖမ်းမိ - Gothic အဘိဓါန်ထံမှအနုပညာ Nouveau ရန်။
လတ်ဗီးယားရဲ့သမိုင်းရှုပ်ထွေးပြီးပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောနေသည်။ တိုင်းပြည်ပြန်အကြီးအအင်အားကြီးများ၏ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှု၏ဗဟိုမှာမိမိတို့ကိုယ်ကိုရှာမတှေ့ဘူး။ မြောက်မြားစွာစစ်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ရက်မှာခေတ်သစ် image ကိုသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိသည်။
နှစ်ပေါင်းငါးဆယ်လတ်ဗီးယားဆိုဗီယက်ယူနီယံ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အ 1991 အတွက်လွတ်လပ်ရေးရရှိခဲ့သည်။
1 ။ မြို့ဟောင်း: လမ်းများများဝင်္, cobblestone တစ်မူထူးခြားတဲ့အလယ်ခေတ်ဇာတ်ကောင်။ အဆိုပါ Town Hall ရင်ပြင်ထုတ်စစ်ဆေးရန်သေချာစေပါ။ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ Baroque အဆောက်အဦးများ, အနုပညာ nouveau နှင့် Gothic မျက်စိကနေကိုက်ဖြတ်ကြဘူး။
ကဲ့သို့သော - လူအတော်များများအသင်းတော်များ၏အဟောင်းကိုမြို့မှာတော့ စိန့်ပေတရု၏ဘုရားကျောင်း ။ 120 မီတာထက်ပိုမို - မကြာသေးခင်အချိန်အထိ, လမ်းနားမှာကမြို့အတွင်းအမြင့်ဆုံးအဆောက်အဦးဖြစ်ပါတယ်။
Ibid - ကြောင်အိမ်, ကိုခေါ်သုံးသမိုင်းဝင်အိမ်များ သုံးညီအစ်ကိုတို့, ခုံးဘုရားရှိခိုးကျောင်း နှင့်, သင်တန်း, ယင်းရီဂါ Castle ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ရဲတိုက်ပြင်းထန်စွာမီးဖြင့်ပျက်စီးခဲ့ပါသည်ယခုနှစ်နွေရာသီတွင်, ဘယ်သို့စာကြည့်တိုက်ကနေပြပွဲနှင့်စာအုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။
2 ။ Freedom ကိုမော်ကွန်းတိုင်အမှတ်: မြို့သင်္ကေတများပါတကား။ ဒါဟာသူ့ဦးခေါင်းကိုကျော်ကြယ်သုံးပွကိုင်ပြီးအမျိုးသမီးတစ်ဦး၏အရုပ်ထုနဲ့တူလှပါတယ်။ ကြယ်လတ်ဗီးယား၏သုံးပြည်နယ်များသင်္ကေတ။ ဒါဟာနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးများအတွက်ပြိုလဲတိုက်လေယာဉ်၏ဂုဏ်အသရေအတွက် 1935 အတွက်တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဆိုဗီယက်ကာလ၌, အထိမ်းအမှတ်အဆောက်အဦးသယ်ဆောင်, ဒါပေမယ့်နေဆဲကျန်ရစ်လိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Freedom ကိုမော်ကွန်းတိုင်ပတ်ပတ်လည်ကိုသင်အေးအေးဆေးဆေးလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်ကော်ဖီခွက်ကိုခံစားနိုငျတဲ့ပန်းခြံဖြစ်ပါတယ်။
3 ။ ဗဟိုစျေး: အဟောင်းကိုမြို့တောင်ဘက်ကိုသင်အရာအားလုံးကိုမဝယ်နိုင်မည့်ကြီးမားသောစျေးကွက်လည်းမရှိ - အဝတ်, အစားအစာ, စာအုပ်များ - နှင့်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောစျေးနှုန်းနှင့်အတူ။ စျေးကွက်တစ်ခုယူနက်စကိုရဲ့ကမ္ဘာအမွေအနှစ်များဖြစ်ပါသည်။ ထိုသို့တစ်ဦးကသိသာထင်ရှားသောအစိတ်အပိုင်းကိုမူလ airships အစေခံရန်တည်ဆောက်အဟောင်းလေယာဉ်ရုံတွင်တည်ရှိသည်။
ခရီးသွားဧည့်ထိုကဲ့သို့သောထူးခြားတဲ့စျေးဝယ်စင်တာကိုလျစ်လျူရှုလို့မရပါဘူး။ ဒါဟာလုံခြုံမယ့်ပေမယ့်တန်ဖိုးရှိမယ့်သတိထားပါ: ထိုကဲ့သို့သောနေရာတစ်နေရာ - ခါးပိုက်နှိုက်တစ်ဦးပရဒိသု။
လူဦးရေ:2လူဦးရေသန်း။
ဧရိယာ: 64.589 မီတာ2.
ငွေကြေး: LAT အံ။
ရီဂါရဖို့ကိုဘယ်လို: မော်စကို, စိန့်ပီတာစဘတ်, Minsk, ကိယက်ဗ်နှင့်အခြားမြို့များမှတိုက်ရိုက်နေ့စဉ်ပျံသန်းမှု; ရထားလည်းနေ့တိုင်းကို run ။ လတ်ဗီးယားရုရှားရိုက်ထည့်ရန်ဗီဇာလိုပါတယ်။
0.1 ထိပ်တန်း 10 အံအွန်လိုင်းကာစီနိုဆိုဒ်များများစာရင်း
3.0.1 သမိုင်းနောက်ခံ - လောင်းကစားဝိုင်းအပေါ်လတ်ဗီးယားဥပဒေများ
3.1.2 ရီဂါ, လတ်ဗီးယား: "မြောက်ကိုရီးယား၏ပဲရစ်"